DAAWO SAWIRO:- Madaxweyne Waare oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wafdi Uu Hogaaminayo Wasiirka Howlaha Guud ee dowlada Soomaaliya oo Jowhar soo Gaaray. – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:- Madaxweyne Waare oo Xafiiskiisa Ku Qaabilay Wafdi Uu Hogaaminayo Wasiirka Howlaha Guud ee dowlada Soomaaliya oo Jowhar soo Gaaray.
Hiiraan Xog, Mar 12, 2018:- Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Howlaha guud iyo guryeynta dowlada federalka Soomaaliya Eng Saadaq Cabdullahi Cabdi ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar.
Wafdigaan uu hogaaminayo Wasiirka Wasaarada howlaha guud, dib u dhiska iyo guryenta xukuumada soomaaliya Eng. Saadaq C/llaahi Cabdi ayaa waxaa caasimada Hirshabeele kusoo dhaweeyay Wasiiro,xildhibaano iyo Maamulka gobolka Sh/dhexe.
Booqashada wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowlada federalka ayaa lagu sheegay inay tahay qiimeynta baahida guud ee dib u dhiska dowlad goboleedka Hirshabelle.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ayaa waxa ay ka wadahadleen sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa wadooyinka iyo dhismayaashii dowlada ee ku yaal dowlad goboleedka Hirshabelle.
Wasiirka Howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka Hirshabelle Jaamac Xuseen Xaashi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowlada federalka uuna rajeynayo in dib u dhis lagu sameeyo deegaanada Hirshabelle.
Sidoo kale Wasiirka Howlaha guud iyo guryeynta dowlada federalka Enj Saadaq ayaa sheegay booqashada ay ku yimaadeen caasimada Hirshabele inay la xiriirto sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa baahiyada ka jira.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in iskaashi sameyn doonaan Wasaaradaha howlaha guud eek a jira dowlad goboleedyada dalka iyo wasaarada howlaha guud ee dowlada federalka Soomaaliya.
Booqashada wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowlada federalka ayaa booqashadan uu ku tegey magaalada Jowhar ay tahay tii ugu horeysay waxaana maalmaha soo socoda uu joogi doonaa magaalada Jowhar.
Hase yeeshee Wasaarada Howlaha Guud iyo Guryeynta ayaa wada qorshe ay ku dooneyso inlagu dayactiro wadooyinka ku burburay dagaalada sokeeye ee HIrshabelle.
Al-Shabaab ayaa xeray Garoomada kubada cagta ee magaalada Muqdisho